Ny Herin 'izao fotoana izao: Torolalana ho an'ny fifohazana ara-panahy - Eckhart Tolle (Audio)
Fifandraisana Sokajy PARADIGM KAMIT
Ny sehatra tsy ara-potoana, ny lozam-pamokarana fampandrosoana mifandraika amin'ny toe-karena Afrikana.
Ny hetsika tsy ara-potoana dia tsy voafetra amin'ny paikady velona ihany fa amin'ny safidy malalaka sy mahatsiaro tena ho an'ny Afrikana. Misy maromaro ...
Nahoana isika no tsy hitsahatra hiady amin'ireo mpilalao sarimihetsika tsy miankina aty Afrika?
Any amin'ireo firenena indostrialy, ny tsenan'ny asa dia ny toerana ifanaovan'ny famatsiana sy ny tinady. Saingy ao amin'ny tontolo afrikana izay ahitana ny asa-tena sy ny mpandraharaha micro dia ny ...
Fifindran'ny kolontsaina sy ara-panahy amin'ny mainty hoditra
Noho izany, hamerina ny tsikelikely amin'ny tenany amin'ny kompleks ambany izy. Ary mba hanafenany ny toetrany dia hanetsiketsika azy ary hanao tsinontsinona ireo rahalahiny "hazakazaka" izy. Ny tohan-keviny dia mendrika amin'ny ...
Ny ideal 42 amin'ny Maat amin'ny tempolin'i Isis sy ny didy 77 an'ny Maat
Ny lalàna 42 momba an'i Maat dia naseho tamin'ny pretra sy ny kapoakan'i Ejipta fahiny ary nofehezina mihoatra ny 5000 taona talohan'ny vanim-potoanan'ny Kristiana. Ireo no fitsipika ...
Inona no atao hoe Kemite?
Kemit / Kamite dia olona mahatsapa ny maha-taranaky ny tari-dalan'ny olombelona amin'ny lalan'ny MAAT manohitra an'i Isfet. Tsy ampy ny hoe mainty fotsiny. Misy ...
Andao hiverina any amin'ny lovantsika, ny kolontsaintsika, ny filozofia, ny fomba fiainantsika, ny rafitra politika, ny toekarena. Tsotra, avelao ho tonga tena indray isika, alohan'ny farany. [Module atody atody = Amazon ...
Fihirana sy hiran'ny Vavaka (Boky)
Fihirana sy vavaka Kamite: Ity asa vaovaon'i Jean Philippe Omotunde ity dia manondrika antsika eo amin'ny lafiny ara-panahy Kamite an'i Afrika pharaonic ary manasa antsika hahita hira maro sy ...
Kemites dia tsy olona manana loko hoditra ihany, pigmentation mainty. Kemites dia olona manaiky ny tenany ao ...
Afrikhepri dia iray amin'ny fitaovana ampahalalana ho an'ny fizarana Fahalalana. Tsy miasa ho an'ny tombotsoan'ny faribolan'olom-bitsy izy io fa ho an'ny tombontsoan'ny besinimaro. Ny tanjony dia ny…